Hamro Yatra | » नेपाल भित्रियो नयाँ कोरोना, वैज्ञानिकहरूले यसबारे के भनेका छन्? नेपाल भित्रियो नयाँ कोरोना, वैज्ञानिकहरूले यसबारे के भनेका छन्? – Hamro Yatra
> नेपाल भित्रियो नयाँ कोरोना, वैज्ञानिकहरूले यसबारे के भनेका छन्?
काठमाडौं, मंसिर २० । नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमबार दुई जनामा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि गरेको हो।
जनस्वास्थ्य अधिकारीहरूले भने अहिले नै ओमिक्रोन यसअघिको डेल्टा भेरियन्टभन्दा खतरनाक छ भन्ने प्रमाणित भइनसकेको बताएका छन्। ओमिक्रोन कति संक्रामक छ र संक्रमण भएपछि यसले कति सिकिस्त पार्छ भन्ने पनि थाहा छैन। दक्षिण अफ्रिकाका वैज्ञानिकहरूले पछिल्लो समय ओमिक्रोनको संक्रमण धेरै फैलिएको र पहिला संक्रमित भइसकेकाहरूलाई फेरि यसको पनि संक्रमण देखिएको बताएका छन्।
बेटा र डेल्टा भेरियन्ट आउँदा यति धेरै संख्यामा पहिला संक्रमित भएकाहरूलाई फेरि संक्रमण नभएको उनीहरूको भनाइ छ। दक्षिण अफ्रिकाका वैज्ञानिकहरूका अनुसार डेल्टाभन्दा ओमिक्रोन दुई गुणा बढी संक्रामक हुन सक्ने देखिएको छ। एउटा अध्ययनले ओमिक्रोनको संक्रमणले धेरै सिकिस्त नपार्ने देखाएको छ। त्यो अध्ययन दक्षिण अफ्रिकाका युवाहरूमा मात्र गरिएकाले वृद्धवृद्धालाई यसको असर कस्तो पर्छ भन्ने यकिन छैन।
कोरोना भाइरस आफ्नो स्पाइक प्रोटिनको मद्दतले मानव शरीरका कोषिकाहरूमा छिर्छ। अहिलेका भ्याक्सिनले त्यही स्पाइक प्रोटिनलाई टार्गेट गरेका छन्। स्पाइक प्रोटिन त्यति धेरै म्युटेसन हुँदा यसले भ्याक्सिन लगाएपछि शरीरमा बनेका एन्टिबडीलाई छल्ने हो कि भन्ने डर छ। स्पाइक प्रोटिनमा भएका यी म्युटेसन रोग सर्नेमा पनि अझै धेरै मद्दत गर्छ कि अर्को डर पनि छ।
विज्ञहरूले अहिले उपलब्ध भ्याक्सिनहरूले नै ओमिक्रोन भेरियन्टविरूद्ध केही हदसम्म काम गर्ने अपेक्षा गरेका छन्। खोप लगाएको ६ महिनापछि एन्टिबडी कम हुँदै जाने कुरालाई ध्यानमा राखेर बुस्टर डोज लगाउनु पर्ने आवश्यकता उनीहरूले औंल्याएका छन्। अमेरिकी सरकारका प्रमुख मेडिकल सल्लाहकार एन्थोनी फाउचीले मानिसहरूलाई बुस्टर डोज लगाउन र मास्क लगाउने, भीडमा नजानेजस्ता सुरक्षाका तरिका अपनाउन आग्रह गरेका छन्।
केही वैज्ञानिकहरूले भने बुस्टर डोज नलगाए पनि पहिला लगाएका भ्याक्सिनले बनाएका टी सेलले भने काम गरेर सिकिस्त बिरामी हुनबाट रोक्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। खोप निर्माता मोडेर्ना, फाइजर-बायोएनटेक, जोन्सन एन्ड जोन्सन र अष्ट्राजेनेकाले आफूहरूले ओमिक्रोनको अध्ययन गरेको र नयाँ भेरियन्टविरूद्ध आफूहरूले काम गर्न सक्ने आत्मविश्वास व्यक्त गरेका छन्।
नु राख्दा धेरै मानिसले न्युजस्तो सुन्न सक्ने र सी धेरै मानिसको थर (जस्तै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ) हुने भएकाले यी अल्फाबेटलाई छाडेर ओमिक्रोन राखिएको हो। आफ्नो नीतिअनुसार कुनै जातीय समुदाय, सामाजिक, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र पेशागत समूहलाई असर पर्ने गरी भेरियन्टको नाम नराखिने डब्लुएचओले जनाएको छ।